२ महिनापछि सुकेटार विमानस्थलमा जहाज अवतरण – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > २ महिनापछि सुकेटार विमानस्थलमा जहाज अवतरण
पोष्ट गरिएको असार. २६, २०७८ मा २:३० मध्यान्ह असार २६, २०७८
फुङ्लिङ । कोभिड—१९का कारणले लामो समयसम्म बन्द रहेको ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलमा आज नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज अवतरण भएको छ । कोभिडको कारणले दुई महिनादेखि नियमित उडान बन्द भएकामा आज पहिलोपटक जहाज अवतरण भएको हो ।
नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले काठमाडौँबाट सात जना यात्रु लिएर आज बिहान सुकेटार आइपुगेको थियो । ताप्लेजुङबाट १६ जना यात्रु लिएर जहाज काठमाडौं फर्केको सुकेटार विमानस्थलका स्टेशन इन्चार्ज लोकेन्द्र लिम्बुले बताए ।
निगमले गत सोमबारदेखि नै नियमित उडान शुरु गरेको थियो । गत सोमबार काठमाडौँबाट नौ जना यात्रु लिएर आएको विमान मौसम खराबीका कारण अवतरण हुन नसकेपछि जहाज पुनः काठमाडौं फर्केको थियो । सोमबार अवतरण हुन नसकेको जहाज आज अवतरण भएको सुकेटार विमानस्थलका स्टेशन इन्चार्ज लिम्बुले बताए ।
सुकेटारमा हप्तामा चार दिन (सोमबार, बुधबार, शुक्रबार र शनिबार) नियमित उडान हुने सुकेटर विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । तत्कालका लागि काठमाडौंदेखि ताप्लेजुङसम्म सात हजार ५० विमान भाडा शुल्क र ताप्लेजुङदेखि काठमाडौं सात हजार १९० भाडा शुल्
बिकास न्युज असार २६, २०७८
कांग्रेसकाे आगामी नेतृत्व दोश्रो पुस्ताका नेताले गर्नेछ: डा. शशांक काेइराला
निषेधाज्ञालाई कडाई गर्दै प्रशासन, मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारवाही
मनाङलाई पुन: स्थलमार्गसँग जोड्न सडक डिभिजनले थाल्यो काम